I-Quiet Cozy 2 BD House | Ukujongwa kweDekhi|Isaphulelo saseBusika
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJulie
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uJulie iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu isandula ukulungiswa ngokuyinxenye kwaye ihlala phezulu kwinduli ejonge i-Ambridge enabemi abamalunga ne-7,000. I-Ambridge imi kuMlambo iOhio malunga neekhilomitha ezingama-25 kumntla wePittsburgh. Le ndlu incinci inobushushu kunye ne-air conditioner eludongeni enedesika ethandekayo yee-BBQs. Inegumbi lokuhlala kunye nekhitshi kumgangatho ophambili kunye namagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elisezantsi elinendawo yokuhlamba impahla. Izitebhisi zithe tshitshilili ukuya kumgangatho osezantsi kodwa uneziporo.
Gxininisa umtsalane wale ndlu wanamhlanje kunye nowakudala. Inobuhle obuninzi kwaye imiswe kakuhle. Inekhitshi epheleleyo enemicrowave, isitovu kunye nefriji, kunye neKeurig yekofu. Inomabonakude kunye ne-wifi kunye nomdlali we-dvd. Kukho idekhi yeBBQ.
4.45 ·Izimvo eziyi-85
4.45 out of 5 stars from 85 reviews
4.45 · Izimvo eziyi-85
Siyamthanda ummelwane, wonke umntu uluncedo kwaye unobuhlobo. Ikwazolile kwaye ikhuselekile. Indawo yokupaka isesitratweni.
Akukho nxibelelwano luninzi lweendwendwe ngeli xesha! Nangona kunjalo umamkeli-zindwendwe wam ukufutshane kwaye uyafumaneka ukuze andincede ngeenkxalabo. Ukhathalelo olongezelelweyo lusetyenziswa ngeli xesha lokucoca yonke imigangatho echukunyisweyo enezibulali ntsholongwane phakathi kwabaxumi. Kananjalo amaqela awavumelekanga kule ndlu. Le yindawo ebumelwaneni kodwa ezolileyo kakhulu.
Akukho nxibelelwano luninzi lweendwendwe ngeli xesha! Nangona kunjalo umamkeli-zindwendwe wam ukufutshane kwaye uyafumaneka ukuze andincede ngeenkxalabo. Ukhathalelo olongezelelwey…